WONDERFUL UNIVERSE: “တောင်တန်းတစ်ခုရဲ့အိပ်မက်”
အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဆုတွေထဲမှာဒီနှစ်ထဲ စွံပါစေ ပါတယ်နော်..လူပျိုကြီးးးးးး
ငါ့တောတောင်တန်းကလေးမှာတော့.. ငါဟာ... ခန်း...နား... လို့အမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
:Pဦးဘိုက စွံပါဒယ်ဗျ..။ ဟက်ဟက်ဟက်ပီးဘသ်ဒေးးးးး ပါဦးဘို။မွေးနေ့မှစ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။။။
HaPpY bIRtHdAy ပါ..ဒီနေ့ မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ မှသည်...နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာပျော်ရွင်စွာဖြင့် ချစ်သောမိသားစု. သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ. ညီအကိုမောင်နှမများနှင့်အတူတူဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
လူမှုဝန်ထမ်းစိတ်အပြည့်ရှိသော အများအကျိုးကိုသယ်ပိုးတတ်သော အစ်ကို ဘိုဘို မွေးနေ့မှစ ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အပေါ်ကလူတွေရေးတာတွေ တခုမှ မသိရပါလာ့းမောင်ကိုကို
*****HAPPY BIRTHDAY BROTHER ကြီး*****ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူသာယာချမ်းမြေ့ပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုလေးနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေရန်တောင်းဆုပြုပါတယ် အကိုကြီးမိုးစက်ကြီးကြီး ဘရားသားကြီးရယ်။သာယာချမ်းမြေ့ပါစေနော်မိုး
Happy Birthday Ko Bo,Wishing you all the best....With Peace,Zephyr
ဖိုးစိန်ရေးတဲ့ Birthdayပို့စ် ဖတ်ပြီး၊ ၄င်းမှလင့်များလည်း ဖတ်ပြီး...ဇွန်ရေးသော Birthdayပို့စ် ဖတ်ပြီး၊ ၄င်းမှလင့်များလည်း ဖတ်ပြီး...Happy Birthday!!!(စကားစပ်လို့...အမရဲ့ အကို အငယ်ဆုံးက May 21 မွေးနေ့ရှင်...အသက်လေးဆယ်မှ အိမ်ထောင်ကျတာ။ဆေးပေးမီးယူ၊ လက်တွဲဖော်၊ ပါရမီဖြည့်ဖက် ..စတဲ့ ကောင်းခြင်းတွေ အားလုံးပြည့်စုံသူလေးနဲ့ပါ။)
ညီပျော်ရွှင်ပါစေ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျမ္မာခြင်း ချမ်းသာခြင်း သုခနဲ့ ပြည့် စုံပါစေ ဘေးဘယာဝေးကွာ အောင်မြင်မှုများနဲ့ ပြည့် စုံပါစေ BIRTH DAYHAPPY HAPPY BIRTH DAY လိုအင်ဆန္ဒတွေလဲပြည့် စုံပါစေ ညီ ခင်တဲ့ကိုကြီး သုဒြေ္န
တတိယ ဆုတောင်းပါပျော်ရွှင်ပါစေ မွေးနေ့မှာညီရီနိုမာန်
Happy Birthday Ko Ko Bo!!!
ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး ဦးဘို....ချစ်သောမောင်နှမတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပြီ....ဒီဝါကျွတ်အမှီ အမြန်စွံပါစေဗျိုးး)
ပျော်စရာမွေးနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာ မောင်နှမတွေရေးထားတဲ့ စာတွေ ဖတ်ကြည့်ယုံနဲ့ သိရပါတယ်... နောင်နှစ်များမှာလဲ ဒီထက်မက ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့များစွာကို ချစ်သော မောင်နှမတွေအပြင် ကြင်နာသူလေးကိုပါ ဘေးနားထား၍ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ကိုဘိုရေ....
မနေ့ကကော့မန့်သွားမရေးရလို့ တိုင်ပင်ထားလို့ ခုမှလာဆုတောင်းပေးရတယ်အကိုတော်ရေHappy Birthday!!!!!!!!!!
ဘာမှမပေးလိုက်ရပေမယ့် ရင်ဘတ်ချင်း ထပ်တူကျ ခဏလေးတွေ့ခွင့်ရလိုက်တာ မမေ့ဘူး ညီဂျောင်ရေ...မွေးနေမှစ၍ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ..ချစ်ခင်စွာ..
မမကောင်း.. ဘယ်လို ခေါ်တာပါလိမ့်.. မိုးစက်ကြီး ဆိုတော့ မီးစက်ကျိုး အဲ့.. မီးစက်ကြိုးး)))
အဲ့ ကိုကိုနော် ညလေးဆီ ကို စာလာ မဖတ်ပဲနဲ့ မိုးစက်ကြီး ကို လာ ဘာသာ ပြန်နေတယ်....အဟက်...:P
ဘဝတလျှောက်လုံး သာယာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ .. :Dချစ်ညီမ :D